Dagaal khasaaro dhaliyay oo dhexmaray Macawisley iyo ciidamo Itoobiyaan ah - BBC News Somali
Dagaal khasaaro dhaliyay oo dhexmaray Macawisley iyo ciidamo Itoobiyaan ah
13 Febraayo 2020
Lahaanshaha sawirka YouTube
Wararka laga helayo gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal xooggan uu dhexmaray ciidamo Itoobiyaan ah iyo maleeshiyada hubeysan ee loo yaqaano Macawisley, waxa uuna dagaalka ka dhacay tuulada Af-qurun oo qiyaastii 48 KM u jirta deegaanka Far Libaax.
Sababta dagaalka ka dambeysay ayaa lagu sheegay in kadib markii ciidamo Itoobiyaan ah oo ka soo gudbay xadka u dhaxeeya gobollada Bakool iyo Hiiraan ay soo mareen fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyada Macawisley, waxaana wararku intaasi ku darayaan in dagaalka dhexmaray labad dhinac uu saacado qaatay ayna ku dhinteen dad kor u dhaafaya labaan ruux.
Ilaa haatan ma jiro wax war ah oo ka soo baxay mas'uuliyiinta heer maamul iyo mid Federaal oo xaqiijiyay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi.
Macawisleyda ayaa ka howlgasha qeybo ka mid ah gobollada Hiiraan iyo Bakool oo ay kula dagaalamaan Al-Shabaab.
Itoobiya oo ciidamo geyneysa gobollada dalkeeda
Soomaali iyo Itoobiyaan si ula kac ah badda loogu daadiyay markii labaad
Maxaad ka ogtahay guriga guur guura?
Waa kuwama "Macawisleyda"?
Lahaanshaha sawirka JOWHAR
Maleeshiyaadka "Macawisleyda" waxay soo shaac baxeen sannadkii 2014-kii, waxay ka bilowdeen qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan oo dagaal culus ay Al-Shabaab kula galeen.
Sidoo kale waxay markii dambe ka aasaasmeen deegaanka Adan Yabaal oo Shabeellaha dhexe ka tirsan.
Waxaa lagu qiyaasaa illaa 50 dabley, waxaa la sheegaa in aysan jirin cid taageerta sida dowladda Federaalka ee Soomaaliya ama ciidammada kale ee Soomaaliya ku sugan.
Dhammaan, "Macawisley" uma tababarna dagaalka balse waxay ku dhiiran yihiin in ay si wataan dagaalkooda ka dhanka ah kooxdaas.
Malleeshiyaadkan waxay sheegeen inay kasoo horjeedaan in "shacabka deeganadaas ay ururka Al Shabaab ka qaadaan canshuuraha iyo in kooxda ay carruutoodu ciidan u qortaan".
Arrimaha inta badan ku khasbay in qaar kamid ah dadka deegaanka ay billaabaan guluf ka dhan ah Al-Shabaab waxaa ka mid ah xoog ku qoridda dadka ay doonayaan inay ciidan u noqdaan ururka oo ay ka mid yihiin carruurta.
Qaar ka mid ah odeyaasha deegaanno ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in aysan u dul qaadan doonin dhibaatooyiinka ay ku hayaan Al-Shabaab isla markaana ay ka mid noqdeen malleeshiyaadka "Macawisleyda" si ay isaga difaacaan ururka Al Shabaab.